Wararka Maanta: Jimco, Apr 22, 2022-Madaxweyne Farmaajo oo sharci-darro ku tilmaamay Doorashooyinka isbarbar socda ee magaalooyinka Ceelwaaq iyo Garbahaareey
Wareegtadaan oo lagu socodsiiyay Madasha Wadatashiga Qaran iyo guddoomiyaha kumeel gaarka ah ee Golaha Shacabka ayaa lagu faray in la xushmeeyo heshiiskii 17-kii Sebteembar 2020 iyo habraacyadii ku lifaaqnaa ee ay xubnaha Madasha Wadatashiga Qaran kala saxiixeen 1-dii bishii Oktoobar 2020 iyo 27-kii May 2021.
“Qof lagu soo doortay hannaan khilaafsan heshiisyada doorashooyinka iyo Xeerka Lam. 30 ma yeelan karo xuquuq lamid ah xildhibaannada lagu soo doortay hab waafaqsan heshiiskii 17ka Sebteembar 2020. Sidaas darteed, kama qeyb qaadan karo doorashooyinka Guddoonka iyo tan Madaxweynaha ayadoo aan la helin heshiis ay wadar-ogol u gaareen Madasha Wadatashiga Qaranka si waafaqsan heshiiskii 17-ka Sebteembar ama uusan soo saarin Barlamaanka 11aad sharci wax ka baddalaya xeerkii Barlamaanka labadaiisa aqal ay hore u ansixiyeen.” Ayaa lagu yiri Wareegtada kasoo baxday xafiiska Madaxweyne Farmaajo.
Farmaajo ayaa sidoo kale tilmaamay in wax ka baddalka Heshiiskii 17-kii Sebteembar iyo habraacyadii ku lifaaqnaa ay u baahan yihiin heshiis siyaasadeed oo ay dib uga wada xaajoodaan xubnaha Madasha Wadatashiga Qaran, isagoo faray inay degdeg isugu yimaadaan si xal dhameystiran loogu helo kuraasta 16-ka ah ee ku astaysan deegaan doorashadooda degmada Garbahaareey.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa adkeeyay in lasii dardargeliyo doorashooyinka loo madalsan yahay ee guddoonka labada Aqal iyo doorashada Madaxweynaha sida ugu dhaqsiyaha badan.
Wareegtaan Maanta kasoo baxday Xafiiska Madaxweynaha mudo xileedkiisa dhamaaday ee Farmaajo ayaa imaaneysa xili saaka la qabtay doorashada kursigii ugu horeeyay ee kuraasta 16-ka kursi ah ee deegaan doorashadooda loo wareejiyay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, islamarkaana la filayo isla Maanta in magaalada Ceelwaaq lagu qabto doorashada toban kursi oo kale oo taas oo tirada ka dhigeysa shan kursi.